Fitaovana fanabeazana tsotra, mateza, matanjaka ary takatry ny saina. Ny asa rehetra amin'ny tabilao fikasihana dia azo atao amin'ny fikasihana rantsantanana na hetsika eo amin'ny tampon'ny solaitrabe ary ny fanalahidin'ny lafiny roa dia manamora ny fandidiana.
Ny board surface dia tonga miaraka amin'ny core extruded nano coated ary miaraka amin'ny frame manify kokoa hanaovana ny fampiasana lehibe ny haben'ny projection.
Ho an'ny miasa sy milalao amin'ny ekipa.
Fifampikasohana mamaly sy maharitra.
Lozisialy tsy misy sarany fahazoan-dàlana.
Shortcuts mora ho an'ny hafainganan'ny fifandraisana.
Miaraka amin'ny lovia penina maranitra maimaim-poana
Ny andiany QWB300-Z dia miaraka amin'ny lovia penina QPT100 vao novolavolaina. Paleta ergonomika, mora karakaraina eo amin'ny rantsan-tananao, azo karakaraina tanteraka ary misy safidy loko maro kokoa.
Ny lovia penina marani-tsaina dia nahitana loko 4 penina: mainty, mena, maitso ary manga, famafana iray ary fanondro iray. Ampifandraisina amin'ny solaitrabe amin'ny alalan'ny tariby manokana nomen'i Qomo.
Tongava miaraka amin'ny rindrambaiko fanabeazana maimaim-poana-Flow! Works pro
Mora ampiasaina ilay logiciel rehefa manomana na manome lesona ho an'ny taranja samihafa ianao. Manana vaovao maro izy io
endri-javatra sy loharanom-pitaovana mba hahamora kokoa ny fampianarana ny taranja rehetra, mahafinaritra kokoa ary manentana kokoa ny mpianatra sy ny mpampianatra.
Hevitry ny rindrambaiko
Ny Flow! Ny rindrambaiko Works pro dia manana loharanom-pampianarana an'arivony. Mandritra izany fotoana izany, azonao atao ny manampy ny loharanonao manokana toy ny sary / audio / video ao amin'ny softwared ary tehirizo ho loharano manokana.
Fitaovana manankarena ao amin'ny lozisialy fanabeazana ary azonao atao koa ny mampifanaraka ny barazy. Ireo fitaovana ireo dia ahafahan'ny mpampianatra mampanan-karena lesona mazava ho an'ny fampianarana.
Software naorina amin'ny navigateur
Flow!Works Pro dia manolotra mpitety tranonkala voaorina.
Ny zavatra ao amin'ny tranokala dia azo ampidirina eo amin'ny solaitrabe mba hampiasaina amin'ny famelabelarana. Mandritra ny fikarohana ny tranokala dia azonao atao ny misafidy ny zavatra tianao (sary na lahatsoratra) ary misintona azy eo amin'ny solaitrabe. Izany dia manampy betsaka ny mpianatra hahafantatra mora foana ny lesona.
Ampiasao ho fakan-tsary antontan-taratasy
Flow!Works Pro dia ahafahanao mampifandray ny fakan-tsary ivelany mba hampisehoana ny sary mazava sy hanamarika ny sary mivantana.
Habe isan-karazany ho an'ny safidinao
Azonao atao ny misafidy ny habe 83 "/ 93" / 102 "fandefasana fotsy interactive miaraka amin'ny tahan'ny lafiny samihafa mifanaraka amin'ny fangatahan'ny tontolo iainanao.
Manaraka: Whiteboard Interactive ho an'ny fanabeazana sy fandraharahana
teo aloha: QIT600F2 Manoratra takelaka interactive
Distributor Whiteboard Interactive
Qomo QWB300-Z WHITEBOARD antsipirihany haingana
Flow!Works Pro V2.0 User Manual
Intelligent Pen Tray QPT100 User Manual
QOMO IR Whiteboard QWB300-Z User Manual
QWB300-Z Interactive Electronic Whiteboard Brochure